အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ဟောဒီက ယူကြဦးမလား...........
တီချမ်း တယောက် ယိုးဒယားပြည် ဘန်ကောက်တွင် ၄ နှစ်နီးပါးလာနေပြီးသကာလ ပြည်တော်ပြန်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ။ အောက်ပါ ပစ္စည်းတွေ ပိုနေပါတယ်။ မသယ်နိုင်လို့ပြန်ရောင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘန်ကောက်တွင်း နေထိုင်၊စိတ်ဝင်စားသူများ ဖုန်း ၀၈၉ ၉ ၉ ၀ ၄၄၀၅ သို့ ၀၈၄ ၆၇၁ ၁၁၃၅ ကို ဆက်သွယ် ဝယ်ယူ နိုင်ပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေအကုန် ဦးသူယူ စနစ် နဲ့ ဧပရယ်လကုန်နောက်ဆုံးထားရောင်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရောင်းမယ့် ပစ္စည်းတွေက .....
1. Canon Powershot SX 30 IS (14.1 MP) in excellent condition and has the box and cables. I have had it for about7months
but barely used it as it's justabackup camera. (selling for 15,000 THB. slight negotiable)
2. Canon lens EF 75-300 mm f/4-5.6 USM III ( It's brand new and has been purchased in the states, but never used. Selling for THB 8500/- slight negotiable)
3. Canon Image class D520 laser printer with the ability to print and scan. Purchased it and used only once, and is still under warranty. Condition is extremely good
i'm selling this with an extra toner cartridge(worth 2000 for free) foratotal of THB 7,500/- not negotiable
4. Brand new Illy coffee machine (black color). It's an espresso machine which i received asagift. Comes with one box of illy coffee cubes. Selling for THB 15,000/- not negotiable
Please reply to this post or contact me in 0898804405 to make viewing arrangements or for more information.
First come first serve (sale ends at the end of April 2012)
Posted by တီချမ်း at 1:26 AM
တီချမ်းရေ..ပစ္စည်းဝယ်ဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူး:P တီချမ်းရဲ့ ပုံမှန်စာဖတ်သူပရိသတ်တစ်ယောက်ပါ... မြန်မာပြည်ပြန်သွားရင်လည်း တတ်နိုင်သလောက်စာတွေရေးပါဦးလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်.. တီချမ်းရဲ့ စာတွေဖတ်ရတဲ့အတွက်လည်း တီချမ်းကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်..။ (ရွှေမိုး)
တီချမ်း March 28, 2012 at 2:40 AM
အဲ့တာကိုပဲ စဉ်းစားနေတာ မြန်မာပြည်ပြန်ရင် ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲ လို့ အင်တာနက် ကို စိတ်မရှည်တာနဲ့ပဲ မရေးဖြစ်ဖို့က ပိုများနေတယ် ရေးဖို့ကတော့ ကြိုးစားမှာပါ မဂ္ဂဇင်းတွေဘာတွေ မှာရေးမှာပေါ့ မဟုတ်လဲကိုယ့်ဘာသာ အရှုံးခံ ထုတ်မယ် စဉ်းစားနေတယ် စာအုပ်ထွက်လာရင်လဲ အားပေးနော်
စကားမစပ် ငယ်ငယ်က ကိုရွှေမိုးဆိုတဲ့ အကို့ သူငယ်ချင်း အကိုကြီး တယောက်ကို တဘက်သတ်ထက် နည်းနည်းပို (ဆိုတာက သူ့ဘက်ကလဲ အနည်းငယ် စဉ်းငယ်ခန့် ပြန်) အီစကလီ ခဲ့ဖူးတယ် ရှင်လုပ်တာနဲ့ သတိရသွားပြီ
m March 28, 2012 at 6:47 AM
တီချမ်း.. အားလုံး အဆင်ပြေပါစေ
ချစ်ကြည်အေး March 28, 2012 at 8:08 AM
၇၅-၃၀၀ ကို ခဏလေး ချန်ထားပေးဦးအေ၊ စိတ်ဝင်စားတယ်။ ပြန်ပြောမယ်....း)))
Yin March 28, 2012 at 9:02 AM
I am interested in Item 1 and 2. But I am in Vietnam now. Please advice how should I buy/ Please mail me your email address. I would like for further discussion.
စန္ဒကူး March 28, 2012 at 9:46 AM
တာ့ တာ.... မြန်မာပြည်မှာပျော်ပါစေ... စာလဲဆက်ရေးနိုင်ပါစေ..
တီချမ်း March 28, 2012 at 11:01 AM
အမ် နဲ့ စန္ဒာကူးရေကျေးဇူးပါ ပျော်တာတော့ ပျော်မှာ အသေချာပဲ မပျော်လို့ပြန်မှာလေ
ရင် လန်းစ် နဲ့ ကင်မရာ ကို စိတ်ဝင်စားတယ် ဆိုလို့ ပြောပြမယ်
လန်းစ်က USM နော် IS မပါဘူး အဲ့တော့ တော်ယုံလက်နဲ့တော့ ပုံက ဝါးမယ် ထရိုင်ပေါ့နဲ့ ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ အဝေးအတွက် ကောင်းတယ်
သူက မလေး လုပ် ကနေဒါ အတွက် အသစ်စက်စက် ဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားရင် သေချာပြော
ကင်မရာက ဒစ်ဂျစ်တယ် လန်းစ်နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူးနော် တွဲ သုံးလို့ မရဘူး သူချည်းပဲ ကောင်းတယ်
အဝေးကို ၈၄၀ mm အထိ ဆွဲလို့ ရတယ် ဆိုလိုတာ အရာဝတ္ထု တခုကို ၃၅ ဆ အထိ ချဲ့ ပြီး ရိုက်လို့ ရတယ်
နောက် ဗီဒီယုို အသေကောင်းတယ် နောက်ဆုံး ယူမယ့် သူမတွေ့ရင်တောင် တီက ဗီဒီယုို အတွက် သိမ်းထားဖို့ စဉ်းစားနေတာ ပိုက်ဆံကုန်စရာတွေများနေလို့နည်းနည်း ပြန်ကာမိအောင်ရောင်းတာ တီဝယ်ထားတာ တနှစ် ပြည့်ရုံပဲ
ရှင် တကယ်လိုချင်ရင် အိတ်ပါ အပိုပေးမယ်
Yin March 28, 2012 at 11:20 AM
So interesting....send mail to me, i will chat wf u on line HIHiiiii:)
Vista March 28, 2012 at 1:12 PM
တီချမ်းတော့ လင်တော်မာင့်နောက်ပြန်လိုက်သွားပြီထင်တယ် .. ဂုတ်ထောက်နောက် ဂတုံးဆံပင်ပါသွားပြီ .. စာတွေရေးပါအုံးတီချမ်း ဟင်းချက်နည်းတွေလည်း တင်ပါအုံး ..
တီချမ်း March 28, 2012 at 9:36 PM
ရင် က ဘန်ကောက်မှာလား စာရေးလိုက်လေ ကျုပ်က ရှင့် အီးမေးလ် မှ မရှိတာ
ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ် မောင်မရှိတာ သိပ်ပျင်းစရာကောင်းတယ် ပျင်းတယ် ဆိုတာထက် ဘဝ က အဓိပ္ဗါယ် မရှိဘူး ကိုယ်ကတော့ ပိုက်ဆံ ဆက် အချစ်ကို ဦးစားပေးလိုက်တော့မယ် ဟိဟိ
ရေးပါ့မယ် ခုတလောတော့ မအားသေးတာရယ် အင်တာနက် မကောင်းတာရယ် (မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်ရင် ပိုဆိုးမယ်) အာရုံမလာတာရယ် စတာတွေကြောင့် သိပ်မရေးဖြစ်တာပါ ချက်ထားတာတွေ လဲ တင်ရအုံးမယ်
Yin March 29, 2012 at 5:40 PM
You hah.....I am in Vietnam......my mail add:
Evy March 28, 2012 at 10:42 PM
တီချမ်းရေ ရှင်ပို့စ်တွေကို ကြိုးစားပြီးရေးဦးနော်။ ဘလော့ကိုမပစ်ထားနဲ့ဦး။
တကယ်ပြန်လာတော့မှာလားအဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေ လို့ ဆုမွန်တောင်းပါတယ်.. မန္တလေး ရောက်ရင်လည်း ရွှေစင်ဦး တို့စီလာလည်ပါဗျာ
တီချမ်း March 29, 2012 at 12:45 PM
တီက မန်းလေးမှာ တနှစ်လောက်လာနေဖို့ စီစဉ်နေတယ်
SHWE ZIN U March 30, 2012 at 7:15 PM
တီချမ်း တကယ်လာနေမှာလား စောင့်မျှော်နေပါမယ် လာရင် ဖုန်းနံပါတ် ပေးထားမယ် ဆက်သွယ်နော်
တီချမ်း March 29, 2012 at 12:46 PM
စာတွေကတော့ ဆက်ရေးနေမှာပါ အီဗီနဲ့ဇွန်ရေ
ဘလောခ် သာ ဘယ်လို ဆက်ရေးဖြစ်မလဲမသိတာ
မဟုတ်ရင်လဲ ရှမ်းပြည်မှာ အဖွား အဒေါ် တို့နဲ့ ခဏ သွားနေပြီးတော့ အစားအသောက် ချက်ပြုတ်နည်း စာအုပ်ထွက်မယ်လေ မကောင်းလား